Af-lagaadadii Ibrahimovic Oo Cadho Weyn Ka Abuurtay France + Jawaabaha Wasiirada Iyo Gudiga Ciyaaraha
HomeWararka MaantaAf-lagaadadii Ibrahimovic Oo Cadho Weyn Ka Abuurtay France + Jawaabaha Wasiirada Iyo Gudiga Ciyaaraha
Paris (AFP) – Cadho weyn ayaa ka abuurantay hadal ka soo yeedhay weeraryahanka is qaad qaada ee naadiga Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimovic kaas oo uu si qaawan ugu af-lagaadeeyey wadanka uu ka ciyaaro ee France habeenkii Axaddii.
Xidhiidhka kubada cagta wadanka France ayaa Kulan ay isugu imanayaan maalinta Khamiista ah ee inagu soo fooda leh, baadhitaan ku samayn doona dhawaaqa ka soo baxay afka ciyaaryahanka reer Sweden, kaas oo laga yaabo inay ganaax ku soo rogaan. In kasta oo uu Ibra raali gallin ka bixiyey cayda uu France iyo dadkeedaba caayay, hadana Hogaamiyaha xisbiga midigta fog ee Marine Le Pen ayaa ku baaqay in ciyaaryahankan laga caydhiyo guud ahaan France.
Ibrahimovic, oo si muran badani ku jiro looga saaray kaadhka casaanka ahna loogu siiyey ciyaarta Champions League ee ay Chelsea reebeen Todobaadkii hore ayaa laba gool kooxdiisa u dhaliyey una bareejeeyey kulan ay la ciyaarayeen kooxda ay hogaanka horyaalka kula dagaalamayaan ee Bordeaux Axadii, taas oo Paris lagaga adkaaday ugu dambeyn 3-2.
Go’aano khaldan oo garsoorihii ciyaartu ku qaaday Paris, ayaa dhaliyey in markii ciyaartu dhamaatay uu, Ibrahimovic af-labadii yeedho kuna dhawaaqo isagoo kamaraduhu hayaan weedho ay ka mid ahaayeen: “Muddo 15 sanno ah oo aan ciyaaraha ku soo jiray, Waligay garsoorahan oo kale ma arag. Ee u dhashay wadankan xun, Dalkan aanay u qalmin inay ka ciyaarto Paris. Aad baanu uga wanaagsanahay kooxdii wadankan ka dhisnaan lahayd.”
Laacibkan 33 jirka ah ayaa isla markiiba cambaarayn kala kulmay wasiirka ciyaaraha Faransiiska, Patrick Kanner oo hadalka ciyaaryahanka ku tilmaamay “Cay qaawan”.
“Waxaan jecelahay inaan ka raali galliyo qof kasta oo dhibsaday hadalkaygii. Waxaan doonayaa inaan halkan ka cadeeyo inaanan ula jeedin wadanka iyo shacabka Faransiiska midna. Waxaan ka hadlayay kubada cagta uun, Ciyaartii ayaa la iga badiyey waana inaan aqbalaa, laakiin garsoorihii ciyaartu muu dabaqayn ama raacaynin shuruucda ciyaaraha.
“Waxaan tiraabtan ku hadaaqay anigoo cadho cirkaa maraya oo kacsan, qof kastaana wuu dareemi karaa marka xaaladan oo kale uu ku jiro, kalmadihii iga soo baxay ayaa ujeedadaydii marin habaabiyey.” Ayuu Ibrahimovic ku yidhi warsaxaafadeed uu soo saaray.
Laakiin, raali gallintaasi ma noqonin mid dajisa dareenka shacabka France.
Wasiirka ciyaaraha, Kanner ayaa soo dhaweeyey raali gallinta, laakiin sii raaciyey hadalkiisa “Haddii shaqsiyada qaali u ah sida Zlatan Ibrahimovic hadalada noocan oo kale ahi ka soo baxaan, la yaabi mayno in ay wax ka sii xumi ku sugan yihiin garoomada.”
Hogaamiyaha xisbiga ‘french far-right Front National (FN) party oo ah haweenayda la yidhaahdo- Le Pen ayaa ku baaqday in wadanka laga saaro Ibra-
“Dadka aaminsan in wadanka Faransiisku uu yahay wadan liita . way isaga taggi karaan,”ayay Le Pen ku tidhi idaacada France Info radio.
Jerome Guedj, Oo ah hogaamiyaha xisbiga Socialist party, ayaa weedhaha ciyaaryahanka ku tilmaamay kuwo aan la aqbali karin. “Kubada cagta uun ha ciyaaro oo ha iska aamuso, ama ugu yaraan ha noqdo shaqsi qadariya wadanka uu ka dhex ciyaaro oo ixtiraama, iyo taageerayaasha kooxdiisa ee uu aflagaadeeyey.”
Midawga garsoorayaasha wadanka Faransiiska , ayaa iyaguna dhinacooda hadaladan ugu yeedhay “Virus cusub oo nacaybsho iyo dagaal afeed ah ” oo uu sameeyey Ibrahimovic.
“Waxa jira xuduud iyo qawaaniin lagama gudbaan ah oo aan cidina dhaafi karin,” ayuu ururka garsoorku yidhi.
Ibrahimovic oo imika uun ka soo noqday ganaax laba ciyaarood ah, isla markaana ganaax kale kaga maqan Paris ciyaaraha Horyaalka Yurub kadib casaankii ciyaarta Chelsea ayaa laga yabaa in Fadhiga Khamiista ee xidhiidhka kubada cagta France uu kaga soo baxo ganaax culus oo kale kaas oo uu xataa kaga maqnaan doono ciyaarta furaha ah ee kooxda haysata horyaalka ee Olympique Marseille ay fooda is darrayaan April 5-teeda.
Hearts 4-0 Celtic – All Goals & Highlights Scottish Premiership
17/12/2017 Abdiwahab Ahmed
24/02/2018 Diiriye Ahmed
WWE Royal Rumble 2018 – Full Highlights